Hiran State - News: Ururka Shabaab oo siweyn ugu jabay dagaalada ayaa haa magaca laga bedelayaa.
Ururka Shabaab oo siweyn ugu jabay dagaalada ayaa haa magaca laga bedelayaa.
Mogdisho:- Ururka Shabaab oo ahaa kooxda ugu awooda badneyd kooxaha dagaalka ba'an kala soo horjeeda dowlada hada jirta aya dhinaca kale saaxiibo waaweyn oo ay ka mid yahiin hogaanka sare iyagu ku lahaa TFGda si ay danahooda ugu fushadaan dalka Somaliya.
Hadaba Shabaab siweyn ayey ugu jabeen dagaalada Mogdisho sidoo kale ajaanibtii ka dagaalami jirtay gudaha Mogdisho waxey u baxsanayaan dalkaasi Yemen oo ay hada rabshado ay ku dhuuman karaan ka socdaan. hadaba sida dad badan dhegahooda ku dhacday maalmo dhaweyd kedib markii lagu dhawaaqay dib u soo noleynta midowgii maxkamadaha Somaliya ayey tani cadeyneysaa in Shabaab iyo hogaanka sare ee dalka qarkood ay wada shaqeyn jireen waayo shaqsiyaadka la shaqeeya Shabaab ee dowlada ku jira iyagu ma doonayan hadii Shabaab meesha ka baxdo iney howl gab noqdaan waxeyna abaabul si xowli ah ku socda ka bilaaben magaalada Mogdisho ,sidoo kale waxaa laga yaabaa iney dhawaantan si dadban ula waregaan idaacadaha iyo telefishinka ay dowladu gacanta ku heyso inkasta oo aanu dooneyn in aanu arintaasi ka hor dhacno hada.
Ururkii midowga maxkamadaha iyo dhalinyaro bistoolado wata oo magaalada lagu soo daadiyey iyo jabka Shabaab intuba waa dhaqdhaqaaqyo halmeel laga hagayo. shirka ay iclaamiyeen dowlada ee la sheegayo inuu ka dhacayo Mgdisho waxaa maamulayo hogaamiyaasha iyagu isku magacaabay dib u soo nooleynta midowgii maxaakiimta. sidoo kale hada waxaa magalada Mogdsho ka socda qorshe ay kooxda la baxday midowkii maxkamadaha ay ku doonayaan dhawaantan iney shacabka kaka dhaadhiciyaan in ay jiraan hogaamiyaal iyo ciidamo Shabaabka ka tirsan oo doonaya iney dowlada la heshiiyaan kuwaasi oo uu sitimaankii la soo dhaafay madaxweynaha Somaliya u diyaariyey xero u gaar ah oo iyaga iyo ciidamo daacad u ah kooxda la baxday midowkii maxaakiimta loogu xareynayo isku meel.
Sida muuqata magaalada Mogdisho dhawaantan waxey noqon doontaa goob ay si dadban ula wareegaan Villada kooxo magacyo diimeed huwan oo isku ujeedo ah laakinse magacyo aad u qur qurxoon loo bixiyey oo dhamaantood ka amar qaata hal meel. arimahani waxaanu ka soo diyaarinay warbixin dheer waxaadna dhawaantan maqli doontaan kooxda huwan magacii midowga maxkamadaha iney aad u buun buunin doonaan sidii ay Mogdisho ugu dhici laheyd shirka soo socda bisha Jun iyagoo idaacada dowlda wax badan uga sheegi doona shacabka sidii loo taageeri lahaa shirkaasi oo aan ilaa hada ujeedadiisa la aqoon.
Dhinaca kale afhayeenka baarlamanka iyo tiro xildhibaano ah ayaa qarka u saaran in la bartilmaameedsado si loo baajiyo doorasho ka dhacda dalka ka hor bisha jun ee sanadkan. laakinse markaad dadaalada ay wadaan aduunayda aad dib u eekto waxey u muuqataa in laga kaaftoomay inba ciidamo Somaliyeed oo dano shaqsiyadeed u adeegaya leysku haleeyo, taasi ayaana keentay in magaalada Mogdisho lageeyo ku dhawaad 15 ciidamo African ah.
Laakinse hadaan dulmar guud ku sameyno faraqa u dhaxeeya Shabaab iyo maxkamadahii ISlaamiga ee ka curtay wadanka waa isku mid waxeyna ku bilaawdeen iyaga iyo Alqacida sidan hoos ku qoran.
Ururka Alqacida oo mudo fog dagaal ka waday dalka Afganstan waxuu ku dagaal gali jiray Jabhada mujaahidiita Afganstan (Al mujaahidiin) xiligii ay dagaalka kula jireen dalkii horay loo dhihi jiray midowgii Soveati oo hada loo yaqaano Russia. kedibna dagaalkii kedib waxey la baxeen Talibaan. sidoo kale koox u badneyd Carab waxey la baxeen Afgan Carab oo ah kuwa maanta loogu yeero Al qacida.
Maxkamadahii Islaamiga iyo qaabkii ay ku curteen.
Ka hor intii aysan la bixin midowgii maxkamadaha waxaa la dhihi jiray ururka Al Itixaad Islaamiya waxeyna dagaalo badan ka galeen degaano ka tirsan Puntland iyo Gedo sida magaalada Boosaaso iyo degmada Luuq kedibna waxey la baxeen midowgii maxkamadaha iyagoo aaqirkii ay ka farcameen ururka Shabaab oo iyaguna ah wadaado ka soo jeeda ururka Itixaad. sidoo kale markii ay jabeen midowgii maxkamdaha iyo waxii ka danbeyey waxaa si toos ah dagaladii ula wareegay Shabaab hada ururka Shabaab gabalkoodu waa sii dhacayaa waxaana la soo nooleynayaa magacii midowga maxkamadaha waa isla ururkii Itixaad Islaamiya oo shacabka jahwareerinaya oo maalinba sidii wax ay shacabku cawaan yahiin marba magac ula baxayo waana kuwaasi kuwa maanta iney shacabka dib u hogaamiyan doonayo ujeedadooduna ma ahan dal iyo diin bad baadin ee waa xukun jaceyl.
· admin on May 29 2011 22:07:51 · 0 Comments · 1841 Reads ·
14,588,899 unique visits